Shahaadada DNI ee dhacday: sidee loo cusboonaysiiyaa? | Madasha Mobile -ka
Shahaadada DNI ee dhacday: sidee loo cusboonaysiiyaa?
Cristian Garcia | | Tababarada
Dad aad iyo aad u badan ayaa u baahan DNI elektaroonik ah si ay guriga uga fuliyaan hab sharci, maaliyadeed ama maaliyadeed. Aad bay uga raaxo badan tahay oo waxaas oo dhan waxay kaa dhigaysaa inaadan ka bixin gurigaaga si aad u fuliso nidaam kasta. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa sida loo ogaado haddii aad leedahay shahaadadii DNI ee dhacday inay awoodaan inay ku cusboonaysiiyaan waxyaabo kale oo badan. Wax walba talaabo talaabo. Waad ku mahadsan tahay masiibada, DNI elektiroonigga ah ayaa sii kordheysa maxaa yeelay mar kasta oo aan u qaadanno si ka sii wanaagsan in habraacyadu ay si buuxda u noqonayaan telematic.
Si aad u bilowdo, haddii aadan weli haysan shahaadada DNI ee elektiroonigga ah, waxaan ku bari doonnaa sida loogu dhaqaajiyo tallaabo tallaabo, sida loo adeegsado shahaadada DNI, sida loo kiciyo loona cusboonaysiiyo shahaadada elektiroonigga ah ee DNI. Xaalado badan waxa dhici doona ayaa ah si aad u isticmaasho DNI elektiroonig ah waa inaad haysataa dhammaan shahaadooyinka ansaxa ah ee kuu oggolaanaya inaad gasho habsocod kasta iyo macnaha taasi waxay tahay in aqoonsiga tooska ah ee internetka uu leeyahay taariikh dhicitaan oo aad u baahan tahay cusboonaysiin. Haddii aad haysato shahaadada DNI ee dhacday, ma awoodi doontid inaad wax nidaam ah la samaysid maamulka dawladda. Waxaan halkaas kula tagnaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ka ogaato shahaadada DNI iyo DNI elektarooniga ah.
1 Sidee loo cusboonaysiiyaa shahaadadii DNI ee dhacday oo la kiciyey?
2 Sida loo isticmaalo shahaadadaada elektiroonigga ah ee DNI marka aad cusboonaysiiso?
3 Sida loo dhaqaajiyo DNI elektiroonigga ah markii ugu horreysay?
Sidee loo cusboonaysiiyaa shahaadadii DNI ee dhacday oo la kiciyey?
Haddii shahaadada DNI ee aad haysato ay dhacday ama dhacday maxaa yeelay waxaad joojisay isticmaalkiisa oo hadda ka dib ma heli kartid markaa waa marka aad u aadi karto saldhigga booliiska ee kuugu dhow oo aad ku haysato gurigaaga. Halkaas waxaad ka heli doontaa hal dhibic oo aad ku cusbooneysiin karto DNI elektaroonigga ah waxaadna gudaha ku arki doontaa ikhtiyaarka aad u leedahay "Ku shaqee DNI elektarooniga ah". Hadda waxay ku weydiin doontaa inaad ku qorto aqoonsigaaga akhristaha oo guji bilowga habraacyada.
Hadda waa inaad gelisaa furaha sirta ah ee aad haysato, laakiin iska hubso in haddii aad ilowday, aad had iyo jeer awooda inaad ku gasho farahaaga. Adiga oo aan xusuusan eraygaaga sirta ah, nidaamku wuxuu u baahan doonaa farahaaga sidaa darteed wax dhib ah ma jiraan si loo fuliyo habraacyada. Inta aad farta ku hayso, dabcan. Markaad ku aqoonsato naftaada nidaamkaaga farahaaga, waxay kaaga baahan doontaa inaad gasho mid cusub si aad u beddesho kii hore. Taas ka dib xaqiiji erayga cusub.
Taas ka dib xogtaadu waxay ka muuqan doontaa shaashadda oo ay la socdaan macluumaadka shahaadada elektaroonigga ah ee DNI. Waxaa jira meesha lagugu tusi doono haddii shahaadadaada DNI ee waqtigeedii dhacay la cusbooneysiin karo iyo in kale maadaama aad wareertay oo uusan dhicin. Markaad gaarto bartaas waxaad yeelan doontaa ikhtiyaar aad u cad oo kuu sheegi doona "cusboonaysii shahaadada elektaroonigga ah ee DNI".
Markaad riixdo, waa sida aad u cusboonaysiinayso shahaadada elektiroonigga ah ee DNI wixii intaas ka dambeeya waad samayn doontaa waxay ku tusi doontaa taariikhda cusub ee uu ku dhici doono aqoonsigaaga elektarooniga ah iyo wax walba oo ka sarreeya, waxaa laguu sheegi doonaa in ay hore u ansax tahay oo aad kala shaqayn karto nidaam kasta maamulka dawladda.
Sida loo isticmaalo shahaadadaada elektiroonigga ah ee DNI marka aad cusboonaysiiso?
Si aad u isticmaasho, waa inaad gelisaa kaarkaaga aqoonsiga godka aaladda ay tahay inaad haysato, sidaas ayaa aaladdu u akhrin doontaa chip. Waxa kale oo aad ku samayn kartaa habkan daabacaha iyo noocyada kale ee aaladaha akhriya oo kuu aqoonsada kaarka caqliga leh.
Markaad gasho degel rasmi ah oo lagaa codsaday inaad ku xaqiijiso shahaadada aqoonsigaaga elektiroonigga ah, sida mid kasta oo ka mid ah maamulka dadweynaha, ha ahaato degelka rasmiga ah ee booliiska tusaale ahaan ama xitaa Hanti -dhowrka habraaca canshuurta, Waxay si otomaatig ah u ogaan doonaan shahaadadaada DNI waana inaad gujisaa aqbalida. Hadda isla daaqaddaas ama sanduuqa (oo la yiraahdo kaarka caqliga leh) ee soo muuqan doona, waxaa lagu weydiin doonaa inaad gasho PIN -ka oo markaad gasho, guji aqbal. Xusuusnow si aad u fuliso mid ka mid ah habraacyadan ma yeelan kartid shahaadada DNI ee dhacday.
Sida loo dhaqaajiyo DNI elektiroonigga ah markii ugu horreysay?
Haddii aadan weli haysan DNI elektaroonig ah aad bay u sahlan tahay in la helo laakiin waa inaad qaadataa dhowr tallaabo oo aad keentaa dukumentiyo kale oo ku aqoonsanaya. Halkan waxaan kula soconnaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u awooddo inaad u haysato oo aad u fuliso dhammaan habraacyada maamulka dadweynaha gurigaaga iyo kombiyuutarkaaga gaarka ah.
Tallaabada ugu horreysa uguna muhiimsan ayaa ah inaad tagto saldhigga booliiska qaranka ee kuugu dhow gurigaaga. Waxa uu ku weydiin doono ayaa ah inaad ka dalbato ballan onlayn ah si aad marka hore u tagto, marka waxaan ku talinaynaa in ka hor intaadan tagin saldhigga booliiska aad hore u tagto iyada oo loo marayo mareegaha rasmiga ah oo ballan samayso si aad u fuliso nidaamkan saldhigga booliiska ee aad ka doorato kuwa kuugu dhow
Hadda waa inaad haysataa u geeyey dukumentiyada soo socda maadaama ay yihiin shuruud lagama maarmaan u ah inay awoodaan inay helaan aqoonsigaaga elektarooniga ah:
Sawir aqoonsi oo dhawaan ah
Samee lacag caddaan ah habsocodka maamulka
Hadda iyo mar haddii aad joogto saldhigga booliiska qaranka, waad is arki doontaa dhibco kala duwan oo la mid ah ATM -yada oo aad ku cusboonaysiin karto aqoonsigaaga elektarooniga ah. Mashiinadan ayaa yeelan doona akhristaha farta iyo waliba meel lagu geliyo aqoonsiga. Meeshan waxaad ku qori doontaa PIN ama furaha sirta ah ee aad rabto inaad gasho gadaalna waxaa lagaa doonayaa inaad fuliso nidaam kasta, xitaa cusboonaysiiso markay dhacdo. Shahaadadan waxaad sidoo kale ku raadin kartaa dadka haddii aad haysato magacyadooda iyo magacyadooda diiwaangelin kasta ama nidaamka macluumaadka madaniga ah.
Si aad u sii wadato waa inaad ka soo dejiso barnaamijka DNI elektaroonigga ah bogga rasmiga ah ee Ciidanka Booliska Qaranka, isla taas oo aad hore uga dalbatay ballan saldhigga booliska. Talo ahaan waxaan kuu sheegeynaa inaad isticmaasho biraawsarka Google Chrome si aad u fuliso habraacyadan maadaama uu yahay kan bixiya dhibaatooyinka ugu yar. Waxaad awoodi doontaa inaad barnaamijka ka hesho qaybta soo dejinta ee mareegaha laftiisa, ka dibna dooro nidaamka qalliinka ee aad isticmaasho oo soo dejintu bilaaban doonto.
Taas ka dib waa inaad fulisaa rakibidda caadiga ah iyo tan hadda jirta oo marka la rakibo waa inaad sii wadataa habayn qalabka elektiroonigga ah ee DNI:
Si aad ugu shaqayso aqoonsigaaga elektarooniga ah ee cusub waxaad u baahan doontaa DNI 3.0 akhristaha kaarka smart (waa inaad iibsataa). Markaad haysato, waa inaad ku xidhaa PC -gaaga deked kasta oo USB ah oo aad ku haysato kombuyuutarkaaga. Markaad ku rakibto darawalladiisa, waxaad ka hubin kartaa maamulaha aaladda haddii aad hore u rakibtay aqriste aqoonsi elektaroonig ah. Waxay u soo muuqan doontaa sidii kaadhka casriga ah.
Waxaan rajaynaynaa inaan xallino su'aashaada ku saabsan sida loo cusboonaysiinayo shahaadadii dhacday ee DNI iyo wixii ka sarreeya si loo caawiyo kuwa yimid iyagoon haysan DNI elektaroonik ah oo doonaya inay haystaan. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Tababarada » Shahaadada DNI ee dhacday: sidee loo cusboonaysiiyaa?
Sida loo hagaajiyo qaladka Windows 0x800704ec
Sida loo hagaajiyo adeegyada maqalka ee aan ka jawaabin Windows